को सुनुवाइ शाब्दिक सबैलाई मा फेशन र फैशन उद्योग को दुनिया बाट आधुनिक सर्तहरू। सहयोग, क्रूज र दानाको संग्रह को सबै प्रकार, तैयार-को पहनने र हाउते Couture पोस्टर, पत्रिका पृष्ठ र पसलहरूमा को होर्डिंग आक्रमण। यसरी, दानाको संग्रह धेरै लोकप्रिय आज, हो तिनीहरूले केही ब्रान्डहरु या फैशन घरहरू लागि सेलिब्रेटीहरू लागि प्रसिद्ध डिजाइनर द्वारा बनाईएको हो। तर दानाको संग्रह के गर्छ, र यो नाम पछि के निहित?
उहाँले अंग्रेजी भाषा हामीलाई आए, यो दानाको संग्रह भनिन्छ। यो लाइन वस्तुहरू वा सामान, सीमित वस्तुहरू 10-15, कहिलेकाहीं अर्को नम्बर। सबै वस्तुहरू नै शैली बनेको र सँगै फिट छन्। सामान्यतया, यो दाना ब्रान्ड को मुख्य मौसमी संग्रह बाहेक, डिजाइनर र शो व्यापार को तारा आमन्त्रित गरिन्छ।
पहिलो पटक यस्तो दानाको अन्तिम शताब्दीको 70-एँ मा एक लन्डन बुटीक Wardrobe जारी। आफ्नो मालिक Susie Fo प्रत्येक अन्य संग राम्रो संयोजन र मुख्य डिजाइनर संग्रह बाट फेसनदार वस्तुहरू द्वारा complemented भनेर आधारभूत कुराहरू एउटा सानो संग्रह सिर्जना गर्न आविष्कार। ला Redoute सूची वस्त्र लागि एउटा सानो लेखकको संग्रह - एकै समयमा तिर, Emmanuelle Kahn डिजाइनर यस्तै कुरा सिर्जना गरेको छ।
यो विचार छानिएन थियो र फेसन डिजाइनर डोना Karan। 1985 मा उनले कार्यालय लागि उनको पहिलो दानाको संग्रह प्रस्तुत गरियो। स्कर्ट, ट्राउजर, कपडे: यो वस्त्र मात्र7वस्तुहरू थियो। मोडेल, पहिलो मात्र शरीर र चड्डी, बिस्तारै, सम्पूर्ण संग्रह देखाउन विभिन्न संयोजन मा नै वस्तुहरु परिवर्तन र आफ्नो interchangeability प्रदर्शन अशुद्ध बनाउँछ।
यो विचार मन र डिजाइनर, र आफ्नो ग्राहकहरु आए, र लगभग चाँडै हरेक फैशन घर यसको दानाको संग्रह भएको थियो।
आधुनिक अर्थमा लुगा एक दानाको संग्रह के हो?
मूल दानाको थप प्रस्ताव गर्ने प्रयास जस्तै थियो भने एक महिला को लागि एक आधारभूत दराज एक निश्चित घटना, तर आज यो अवधारणा थप व्यापक प्रयोग भएको छ। यसलाई केही लुगा, एक विषय वा विचार गरेर एकताबद्ध छ। दानाको संग्रह नयाँ ग्राहकहरु, विज्ञापन र ब्रान्ड पदोन्नति आकर्षित गर्न सिर्जना गरियो।
लागि ब्रान्ड, उदाहरणका लागि, पप कलाकार वा अभिनेता, आफ्नो दृष्टि को एक संग्रह मा ल्याउन गर्ने निमन्त्रणा। अक्सर ठूलो बजार लक्जरी को ब्रान्ड एक दानाको सिर्जना गर्न प्रसिद्ध डिजाइनर आकर्षित गर्छ। यो मध्यम वर्ग को सदस्य प्रसिद्ध डिजाइनर देखि उपलब्ध सामान्य कुरा प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। वा त्यो रूढिवादी स्वाद संग विशिष्ट ग्राहकहरु मा केंद्रित फेशन घर, अन्ततः नयाँ ग्राहकहरु ब्रान्ड वफादार आकर्षित जो युवा र साहसी को एक संग्रह सिर्जना गर्न, युवा साईट डिजाइनर निम्तो दिनुहुन्छ। त्यसपछि यो अक्सर भनिन्छ सहयोग धेरै रचनात्मक व्यक्तिहरूलाई सँगै एक दानाको सिर्जना गर्न कहिलेकाहीं।
अक्सर एक दानाको संग्रह सिर्जना कारण कुनै पनि विशेष अवसर वा महत्त्वपूर्ण मिति हुन सक्छ। तिनीहरूले सम्पूर्ण लाइन तमाम मुड परिभाषित।
फैशन को दुनिया मा उल्लेखनीय उदाहरणहरू
विकल्पहरू माथिका सबै दानाको संग्रह धेरै प्रसिद्ध र लोकप्रिय पहिचान गर्न सकिन्छ बीच, दन्त्यकथा भएका छन् कि व्यक्तिहरूलाई र कुराहरू एक तत्काल बाहिर बेचिन्छ।
हामी किफायती ब्रान्डहरु संग सहयोग प्रतिष्ठित डिजाइनर कुरा भने, यो सिर्जना गरेको छ जसले ब्रान्ड अष्ट्रेलिया को UGG लागि ढुङ्गा र rhinestones संग sheepskin जूता को सुपर लोकप्रिय दानाको संग्रहले Dzhimmi up, chu जुत्ता डिजाइनर सम्झन छैन असंभव छ। आम-बजार को श्रेणी मा उत्पादनहरु उत्पादन एच एन्ड एम स्टोर, नियमित उच्च फेशन डिजाइनर को दाना हो: Versache, कार्ल Lagerfelda, Lanvan।
तारा पनि अक्सर डिजाइनर निमन्त्रणा र फैशन ब्रान्ड र फैशन घर को auspices अन्तर्गत आफ्नो दानाको सिर्जना गर्नुहोस्। तसर्थ, गायक Rihanna - अक्सर डिजाइनर को भूमिका मा देखिन्छ। को लागि एक दानाको - उनको नवीनतम काम नदी द्वीप, जूता ब्रान्ड "MANOLO Blahnik" खेल ब्रान्ड Puma र सहयोग। लामो र फलदायी सहयोग Keyt काई र Topshop छ। यो ब्रान्ड लुगा मात्र होइन प्रबर्धन गर्ने, तर पनि उहाँलाई लागि संग्रह सिर्जना।
तपाईं Jubilee समर्पित दानाको सम्झना भने, पाठ्यक्रम, यो एक सफल संग्रह "अप्रिल वर्षा", फैशन घर Burberry को 155th वार्षिकोत्सव समर्पित थियो। यी कुराहरू उज्ज्वल रंग zest मानक डिजाइन ब्रान्ड थप्नुहोस्। मार्क Dzheykobs पनि ब्रान्ड को 10 औं वार्षिकोत्सव गर्न एक रोचक दानाको साथ आए। यो सबै भन्दा राम्रो मोडेल, सबै 10 वर्ष को लागि डिजाइनर द्वारा सिर्जना पनि समावेश छ।
असामान्य र दाना, उदाहरणका लागि, भर्खरै एक ब्रान्ड Moschino संग्रह, बार्बी गुडिया लागि अभिप्रेरित जारी नोट! बाट डेनिस ब्रान्ड काठ काठ र डिज्नी वा अधोवस्त्र ब्रान्ड Tezenis र कोका-कोला वस्त्र संग्रह: र सहकार्य कहिलेकाहीं जस्तै आफ्नो अप्रत्याशित मुठभेडों, हामीलाई आश्चर्य छ। यो आधुनिक संसारमा फैशन असम्भव केही छैन जस्तो देखिन्छ।
रूसी फेसनमा दानाको संग्रह
संसारको रुझान र रूसी डिजाइनर र ब्रान्ड राख्न। त्यसैले, Uliana Sergienko समय समयमा यसको मुख्य वस्त्र लाइन को स्कोप परे, चित्र र असामान्य वर्तमान केहि को विकल्प विविधता गर्न मुख्य संग्रह पनि उद्देश्य संग मौसमी दानाको बाहेक विज्ञप्ति।
प्रसिद्ध रूसी डिजाइनर साथै विदेशी समकक्षों, बजेट ब्रान्डहरु लागि उपलब्ध दानाको संग्रह बनाउन। "आ" गर्न इगोर Chapurin Incity, दाना र Katie Dobryakova Sultanna Frantsuzova लागि परियोजनाहरु, "साम्राज्य" संग्रह र "आनन्द को बर्ड" Faberlic लागि Alena Ahmadullina र "Econika" दानाको संग्रह Evelina Khromchenko - सबैभन्दा रोचक बीचमा।
घरेलू ठूलो बजार र पप स्टार देखि पनि उत्कृष्ट सहयोग बनाउन। उत्तरार्द्ध, को - वेरा Brezhnev को ब्रान्ड पीई लागि सङ्कलन, Keti Topurii र Ksenia Borodina दाना।
कसरी दराज मा दानाको प्रयोग गर्न
दानाको सङ्ग्रहबाट कुराहरू पूर्ण तपाईं सिद्ध दराज बनाउनको लागि नियम सम्झना भने, आफ्नो बाटो मा फिट। तपाईं जाने कि फेशन र रुझान Chase छैन मात्र ती कुराहरू लिनुहोस्। यदि दानाको फेसनदार, को मोडेल नै ब्रान्ड को मुख्य सङ्ग्रहबाट लुगा हेर्न - त्यहाँ पूर्ण भएको फैशन आइटम बन्द सेट गरिएको छ आधारभूत वस्तुहरू टिप्न सामान्यतया सम्भव छ। र तपाईं दानाको प्रसिद्ध डिजाइनर वस्तु किनेको, र यो राम्रो गुण को वस्त्र आधारभूत लेख हो भने, सिजन मार्फत यसलाई फेंक हतार छैन। फैशन cyclical छ, र यो मोडेल अन्य संग्रह वस्तुहरू संग संयुक्त गर्न सकिन्छ।
पूर्ण मोडेल। फेसन संसारमा
शरद ऋतु जूता एडी बिना - मौसम को मुख्य प्रवृत्ति
अप्रेंटिस: पैलेट "Loreal" पेंट्स
प्राचीन पूर्वी का विरासत: आँखा को लागि एंटीमिनी
रूसमा सैन्य पेंशनकर्ताहरूको लागि दोस्रो पेंशनको लागि कति ठूलो छ?